के साउथ इन्डियन फिल्ममा डेब्यु गर्दै छिन स्वस्तिमा ? - हातेमालो डेली
काठमाडौं– पछिल्लो समय नायिका स्वस्तिमा खड्काले दक्षिण भारतीय फिल्ममा अभिनय गर्ने खबरहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् । छोटो समयमै नेपाली फिल्ममा चर्चा बटुल्न सफल स्वस्तिमाले दक्षिण भारतीय फिल्ममा काम गर्ने पक्का भएको खबर बाहिर आइरहेका छन् । नेपाली चलचित्रमा नायिका स्वस्तिमा खड्काको चर्चा चुलिदो छ । चलचित्र ‘बुलबुल’मा काम गरिसकेपछि उनको चर्चा चुलिएको हो ।
Previous articleदेउवाको व्यंग्य : प्रचण्डसँग किन डराएको हो कुन्नि ?
Next articleविराटनगरमा ओली पक्षको जनसभा